Jereo ny toerana lehibe any Amerika atsimo | Vaovao momba ny dia
Amerika atsimo na amerika atsimo dia ny zana-tany atsimon'i amerika ary toerana feno firenena hitsidihana. Izy io dia firenena telo ambin'ny folo izay ny lehibe indrindra dia i Brezila ary manana fiankinan-doha dimy avy amin'ny fanjakana hafa. Ny tantaran'i Amerika atsimo dia malalaka dia lehibe, na dia eto aza isika dia hifantoka indrindra amin'ny zavatra hitantsika amin'ity zanatany ity, satria manana toerana kanto tsy mampino.
Hiresaka aminao momba izany izahay ny sasany amin'ireo toerana manan-danja indrindra any Amerika atsimo hitsidika azy. Ny fizahan-tany any Amerika atsimo dia afaka mitondra antsika amin'ny teboka maro. Izay no antony tsara kokoa ny mazava momba ny zavatra tiana ho hita sy ny misy azy. Manomboka amin'ny sary miavaka mankamin'ny tanàna mahafinaritra ary tantara marobe no miandry antsika.
1 Rio de Janeiro Brezila
2 Riandranon'i Iguazu, Brezila ary Arzantina
3 Perito Moreno Glacier, Arzantina
4 Nosy Paka, Silia
6 Nosy Galapagos, Ekoatera
7 Machu Picchu, Peroa
Rio de Janeiro Brezila
I Rio de Janeiro dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra any Amerika atsimo, tanàna faharoa misy mponina ao Brezila ary toerana mahaliana tanteraka. Ipanema sy Leblon Beach dia faritra tena ilaina ao an-tanàna, miaraka amin'ny manodidina an'i Ipanema ho iray amin'ireo tena miavaka indrindra eto an-tanàna, feno fivarotana. Fa raha te hahita zavatra ao amin'ity tanàna ity isika amin'ny minitra voalohany, ireo no morontsiraka feno Cariocas mankafy ny toetr'andro mahafinaritra. Aza adino amin'ity faritra ity ny miakatra amin'ny fomba fijery Mirante de Leblon. Ny morontsiraka iray hafa izay tena lehibe dia tsy isalasalana fa Copacabana, toerana mety handehanana, mandroboka ary hahita trano fisakafoanana tsara. Tsy hadinonao ny fitsidihana an'i Corcovado miaraka amin'i Christ the Redeemer, malaza, tandindon'i Rio de Janeiro. 30 metatra ny haavon'ny sary vongana ary avy amin'ity faritra ity dia manana fomba fijerin'ny tanàna momba ny tanàna izahay. Ny zavatra hafa azontsika atao eto an-tanàna dia ny fiakarana ny Sugarloaf Mountain, fananganana vatolampy izay azon'ny fiara tariby, tsidiho ny tanàna manodidina an'i Santa Teresa miaraka amin'ny zavakanto an-tanànany na jereo ny kianjan'ny Maracanã malaza.
Riandranon'i Iguazu, Brezila ary Arzantina
Io no iray amin'ireo Fahagagana voajanahary fito eto amin'izao tontolo izao, ary mahatonga azy io ho teboka iray manandanja indrindra any Amerika atsimo. Ireo riandrano ireo dia eo anelanelan'ny Brezila sy Arzantina, amin'ny lafiny roa amin'ny faritra arovana ao amin'ny Valan-javaboary Iguazú any Arzantina ary ny Valan-javaboary Iguaçú any Brezila. Manana jumps 200 mahery izy, ny ankamaroany dia any amin'ny faritra Arzantina. Ireo izay mitsidika azy ireo dia mijanona ao amin'ny Puerto de Iguazú Arzantina na ny Foç do Iguaçú Breziliana. Amin'ny riandrano ianao dia afaka mitaingina sambo mamaky ny faritra ambany. Avy amin'ny lafiny Breziliana dia misy fomba fijery mahafinaritra be dia be, na dia ny ankamaroan'ny dia an-tongotra handehanana ity faritra ity dia eo amin'ny lafiny Arzantina. Aza adino ny Garganta del Diablo, izay vondron-riandrano misy riandrano lehibe indrindra, ary koa ny zavamaniry sy karazam-biby ao amin'ilay toerana.
Perito Moreno Glacier, Arzantina
Este an'ny glacier an'ny Patagonia Arzantina ary izy io dia iray amin'ireo toerana voajanahary mahavariana indrindra. Any amin'ny Valan-javaboary Glacier no misy azy, manodidina ny 80 kilometatra miala ny tanànan'i Calafate. Io no hany glacier ao Patagonia azo tsidihina avy amin'ny tanibe, nefa tsy mila miditra amin'ny alàlan'ny sambo, noho izany izy no malaza indrindra ary tsy isalasalana fa ny olona notsidihina indrindra. Azonao atao ny mahita ny glacier avy amin'ny arabe fa amin'ny sambo ihany koa na amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana an-tongotra amin'ny glacier.
Nosy Paka, Silia
Ity nosy lavitra an'i Shily ity dia iray amin'ireo toerana manintona indrindra izay atolotry Amerika Amerika ho antsika. Eto amin'ity nosy ity, fantatra ihany koa amin'ny hoe Rapa NuiAzontsika atao ny mitsidika ny tanànan'i Tahai, rava arkeolojika miaraka amina sehatra fanaovana lanonana izay ahitantsika ireo sarivongana fantatry ny rehetra momba ity nosy ity. Saingy misy sehatra seremony hafa toa an'i Ahu Akavi na Ahu Tongariki. Zavatra iray hafa hitantsika eto amin'ity nosy mahafinaritra ity ny volkano Rano Raraku na ilay toerana arkeolojika Orongo.
Ity valan-javaboary atsimon'i Silia ity dia tahirin'ny biosfera UNESCO ary iray amin'ireo toerana malaza indrindra any Amerika Atsimo. Ao amin'ny valan-javaboary ianao dia afaka manao zavatra maro toy ny fiakarana amin'ny fomba fijery, jereo Gray Glacier amin'ny sambo, fitsangantsanganana na kayak. Ny fomba fijerin'ny Cuernos del Paine dia manome antsika fomba fijery mahafinaritra amin'ireo tendrombohitra ireo. Ny zava-dehibe indrindra eto dia ny mankafy ireo sary miavaka.
Ny Nosy Galapagos, vondronosy Pasifika an'ny an'i Ekoatora dia toerana manaitra iray hafa. Manana nosy kely telo ambin'ny folo sy enina kely izy ankoatry ny nosy kely. Amin'ireto nosy afaka jerentsika ny gara siantifika Charles Darwin ary indrindra ny fiompiana tsy manana ahiahy, noho izany i Darwin dia namelabelatra ny teôria momba ny Evolution noho ny fanadihadiana natao tany amin'ireo nosy ireo. Afaka mahita morontsiraka vitsivitsy ianao ary mamakivaky nosy maromaro amin'ny dia an-tsambo.
Machu Picchu, Peroa
Ity taloha Tanànan'i Inca miorina eo amin'ny faritry ny tendrombohitra Andes Izy io dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra any Peroa sy any Amerika atsimo rehetra. Io dia arkeolojika manana ny lanjany sarobidy izay misy mihoatra ny roa arivo metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ny azontsika atao eto dia tsy isalasalana fa mitsidika ny rava rehetra hahita azy ireo amin'ny teboka samihafa ary hahafantatra azy ireo amin'ny lalina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Amerika Atsimo